ရင်သားတွဲကျခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲ ? တင်းရင်းအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ ? – Shwe Innlay
HomeBeautyရင်သားတွဲကျခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲ ? တင်းရင်းအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ ?
Ice Massage ဆိုတာကတော့ ရေခဲတုံးကို အသုံးပြုပြီး နှိပ်နယ်တဲ့ နည်းလမ်းပါ ။ ရင်သားတွဲကျခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီနည်းလမ်းကို မမေ့သင့်ပါဘူး ။ ဒီကုသမှုအတွက် ရေခဲတုံး ၂တုံးပဲ လိုပါတယ် ။ ပထမဆုံး ရေခဲ၁တုံးကို ယူပြီး ရင်သားနှစ်ဖက်စလုံးကို ၂မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အထိ ညှင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ ။ ပြီးလျှင် နောက်ထပ်၁တုံးကို ယူပါ။ ပြီးနောက် ရင်သားတစ်ဖက်စီကို ရေခဲတုံးသုံးပြီး နောက်ထပ် ၂မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ဖြေးညှင်းစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ ။ ပြီးသွားလျှင်တော့ ရင်သားကို နူးညံ့တဲ့ သဘက်လေးဖြင့် သုတ်ပြီး နာရီဝက်ခန့်ကြာအောင် ပက်လက်လှန်အနေအထား လှဲနေပါ ။ တစ်နေ့ ၄၊ ၅ကြိမ်ခန့် နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကို ပြန်လည်ရရှိလာမှာပါ ။
Antioxidants နဲ့ Fatty acid တွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ သံလွင်ဆီက ရင်သားတွဲကျခြင်းကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည်တင်းရင်းစေနိုင်ပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို ပြန်လည်တင်းရင်းစေဖို့ သံလွင်ဆီ ၂ဇွန်းပဲ လိုတယ် ။ ပထမဦးစွာ သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းကို လက်ဖဝါးပေါ်တင်ပြီး ပူသွားအောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အနည်းငယ် ပွတ်လိုက်ပါ ။ ထို့နောက် ရင်သားပေါ်ကို အထက်မှအောက်သို့ ညှင်သာစွာ နှိပ်နယ်လိမ်းပေးပါ ။ ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာအောင် နှိပ်နယ်ပွတ်ပြီးလျှင် နောက်ထပ်၁ဇွန်းထပ်ထည့်ပြီး ပထမလုပ်သလို လုပ်ပေးပါ။ စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀ခန့်ကြာအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ ။ ဒီနည်းလမ်းကို တစ်ပါတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၄ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ ။
ဒီနည်းလမ်းလေးက လူသိပ်မသိတဲ့ နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဥအနှစ် ၁လုံး ၊ သခွားသီး ၁လုံး ၊ ထောပတ် ၁ဇွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သခွားသီးကို အခွံခွာဆေးကြောပြီး blender ထဲထည့်ကြိတ်ပါ ။ ထို့နောက် ကြက်ဥအနှစ် နှင့် ထောပတ်ကို ထပ်လောင်းထည့်လိုက်ပါ ။ ထို့နောက် နှံ့စပ်အောင် သမလိုက်ပါ ။ ပြီးနောက် ရင်သားပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင် ရေအေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ ။ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ ။
ကျပ်လွန်း ၊ ချောင်လွန်းသော ဘရာများ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ပါ ။ Fit ဖြစ်တဲ့ ဘရာကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ။
ရင်သားအသားပေး လေ့ကျင့်ခန်းများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ sport bra ဝတ်ဆင်ပါ ။
အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးရန် body scrub ပြုလုပ်ပါ။
အရေပြားတင်းရင်းစေတဲ့ ခရင်မ် (သို့) လိုးရှင်းများလည်း လိမ်းပေးပါ ။
တင်းရင်းတဲ့ရင်သားအလှကို မပျက်စီးစေဖို့ နည်းလမ်းများကို အခြားသူငယ်ချင်းတွေသိအောင်လည်း မျဝေပေးပါဦးနေ်ာ..